Linux သို့အခြား Operating Systems များ Linux မှ
လောကကြီးမှာဘဝကိုဖန်တီးနေတဲ့ငါတို့အတွက် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် အမြဲတမ်းငါတို့ရဲ့ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုပါ "အခြားနည်းလမ်းသုံးစနစ်များ" အများအားဖြင့်သိသာထင်ရှားသည် GNU / Linux များမရ။ သို့သော်လည်းယနေ့လက်ရှိနှင့်လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်သောရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်သိရန်လိုအပ်သည်။
ဤပစ္စုပ္ပန်၌ဤပရောဂျက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းမည် «အခြား Operating Systems » အာဏာတည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းခေတ်မီအောင်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ၎င်းတို့ကိုအောက်ပါအမည်များဖြင့်လူသိများသည်။ “ Haiku, KolibriOS နှင့် Visopsys”.
ဒါဟာအစဉ်အလာရွေးချယ်စရာတွေထဲကတစ်ခုဆိုတာကိုသတိပြုသင့်ပါတယ် Linux အတွက် "အခြား Operating Systems" ငါတို့နောက်ကိုတော်တော်လိုက်သွားတယ် «FromLinux » အဆိုပါဖြစ်ပါသည် ReactOS ပရောဂျက်မရ။ ယနေ့ထိ ၂၀၂၁ ခုနှစ်သည်ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည် တိုးတက်မှုနှင့်သတင်း.
ထို့ကြောင့် ReactOS နှင့်ပတ်သက်သောနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ဝေမှုများ၏လင့်ခ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းထားခဲ့မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤထုတ်ဝေမှုအဆုံး၌သင်သူတို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပြီးလိုအပ်လျှင်၎င်းကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေမည်။
"ရောက်ရှိခဲ့တယ် ReactOS ၀.၄.၁၂Windows Snapping ကိုသယ်ဆောင်လာသည့်ဖြန့်ချိမှုအသစ်၊ အသွင်အပြင်အတွက်အခင်းအကျင်းအသစ်များနှင့် Microsoft Windows နှင့် binary level တွင်သဟဇာတဖြစ်သော open source operating system ၏ kernel တွင်အသစ်အဆန်းများဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Redmond ကုမ္ပဏီ၏စနစ်ကိုတုပရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုပြwithoutနာမရှိဘဲတပ်ဆင်နိုင်သည် (ကောင်းစွာ ... Wine ကဲ့သို့ထူးဆန်းသောပြlittleနာများဖြင့်) ။ အထူးသဖြင့်၎င်းရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုလေ့လာဖို့ MS Windows အတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုတော့သေချာသည်။" ReactOS 0.4.12 ဖြန့်ချိ! သတင်းအချို့ ...
ReactOS 0.4.12 ဖြန့်ချိ! သတင်းအချို့ ...
ReactOS 0.4.11 ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
ရရှိနိုင် ReactOS ဖြန့်ချိကိုယ်စားလှယ်လောင်း 0.4.10
1.1 ယနေ့ GNU / Linux တွင်မည်သည့်အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်ခေတ်မီ Operating Systems များရှိနေသနည်း။
ယနေ့ GNU / Linux တွင်မည်သည့်အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်ခေတ်မီ Operating Systems များရှိနေသနည်း။
ငါတို့ကအစမှာပြောခဲ့သလိုပဲရှိပြီးသား Linux အတွက် "အခြား Operating Systems"ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းလေ့လာမည့်အရာများ “ Haiku, KolibriOS နှင့် Visopsys”အထူးသဖြင့်ဤစီမံကိန်းများသည်လက်ရှိနှင့်ယနေ့ထိတက်ကြွနေဆဲဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီ operating system ၎င်းကိုအောက်ပါအတိုင်းအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။
"Haiku သည်ကိုယ်ပိုင်တွက်ချက်မှုအတွက်အထူးရည်ရွယ်သော open source operating system တစ်ခုဖြစ်သည်။ BeOS မှလှုံ့ဆော်မှု၊ Haiku သည်လျင်မြန်၊ သုံးရလွယ်ကူ၊ သင်ယူရန်လွယ်ကူသော်လည်းအလွန်အစွမ်းထက်သည်။"
"Haiku သည်အဆက်မပြတ်တိုးတက်နေဆဲဖြစ်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အားလုံးတွင်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအတွက်အသုံးပြုနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်သည်။ Haiku သည်အတော်လေးထူးခြားသောအခြား open source platform များနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ပရောဂျက်တွင် kernel၊ ယာဉ်မောင်းများ၊ လူသား ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ toolkit နှင့်ဂရပ်ဖစ် stack မှ desktop applications များအထိအရာအားလုံးကိုရေးပြီး preflets များပါ ၀ င်သည်။ Haiku တွင် open source ပရောဂျက်များစွာကိုသုံးသော်လည်း၎င်းတို့ကိုချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းထားသည်။ ၎င်းသည် Haiku အားများစွာသောအဆင်ပြေမှုများပေးသောထူးခြားသောတည်ငြိမ်မှုအဆင့်ကိုရရှိရန်ခွင့်ပြုပြီးသုံးစွဲသူများနှင့် developer များအတွက်တကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းသည်။"
လက်ရှိအဘို့အသွား ဗားရှင်း R1 / Beta3 ထိုနေ့ကိုမကြာသေးမီကထုတ်ဝေခဲ့သည် 25 / 07 / 2021.
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီ operating system ၎င်းကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည် -
"KolibriOS ၎င်းသည်အစွမ်းထက်။ မြန်ဆန်သောလည်ပတ်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသုံးရန် disk space အနည်းငယ် megabytes နှင့် RAM 8MB သာလိုအပ်သည်။ Kolibri တွင် application processor များစွာပါ ၀ င်သည်။ word processor, image viewer, graphic editor, web browser နှင့်ဂိမ်းပေါင်း ၃၀ ကျော်။ FAT30 / 12 /16 အတွက်အပြည့်အဝပံ့ပိုးမှုအပြင် NTFS၊ ISO32 နှင့် Ext9660 / 2/3 အတွက်ဖတ်ရန်တစ်ခုတည်းသောအထောက်အပံ့ကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်။ နာမည်အကြီးဆုံးအသံ၊ ကွန်ယက်နှင့်ဗွီဒီယိုကတ်များအတွက်ယာဉ်မောင်းများရှိသည်။ "
"KolibriOS သည် MenuetOS ကုဒ်ကို ၂၀၀၄ တွင်အခြေခံအဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီး၊ ထိုအချိန်မှစ၍ ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်လွတ်လပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုဒ်အားလုံးသည် open source ဖြစ်ပြီး GPLv2004 လိုင်စင်အောက်တွင်ဖြန့်ထားသော code အများစုဖြစ်သည်။"
လက်ရှိအဘို့အသွား 0.7.7.0 ဗားရှင်း ထိုနေ့ကထုတ်ဝေခဲ့သည် 13 / 12 / 2009မရ။ သို့သော်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုယနေ့ထိတရားဝင် ISO ပုံနှင့်တကွဖြန့်ချိခဲ့သည် 2021ပြီ XNUMX နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် ISO ပုံများ သြဂုတ်လ 2021.
"Visopsys သည် PC နှင့်တွဲဖက်သုံးနိုင်သောကွန်ပျူတာများအတွက်အခြား Operating System တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှစ၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ဤစနစ်သည်သေးငယ်၊ မြန်ဆန်ပြီး open source ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ရိုးရှင်းသော်လည်းလုပ်ဆောင်နိုင်သောဂရပ်ဖစ် interface တစ်ခု၊ အလုပ်ပေါင်းများစွာကိုကာကွယ်ပေးပြီး virtual memory ရှိသည်။ Visopsys သည်အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်အောင်ကြိုးစားသော်လည်း Visopsys သည်အခြားမည်သည့် operating system ၏ clone မဟုတ်ပါ။ "live" USB stick, CD / DVD, သို့မဟုတ် floppy disk တို့မှဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုသင်စမ်းသပ်နိုင်သည်။"
"Visopsys (VISual OPerating SYStem) ကို“ အစကနေ” ဟုရေးပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှစ၍ ဝါသနာ ၀ င် ၀ တ္ထုပရိုဂရမ်မာတစ် ဦး ကအဓိကရေးသားခဲ့သည်။ Visopsys သည်အခမဲ့ software ဖြစ်ပြီး source code ကို GNU General Public License ၏စည်းမျဉ်းများအောက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ စာကြည့်တိုက်များနှင့်ခေါင်းစီးဖိုင်များသည် GNU Lesser General Public License ၏စည်းကမ်းချက်များအရလိုင်စင်ရှိသည်။
Visopsys အများစုသည် multitasking အပြည့်၊ 32-bit virtual memory၊ ကြီးမားသော monolithic style kernel ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းထားသောအခြေခံ C စာကြည့်တိုက်နှင့်ရိုးရှင်းသော application များ၊ ၎င်းသည်သေးငယ်သော်လည်းအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သော operating system တစ်ခုဖြစ်သည့် graphical သို့မဟုတ် text mode တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။"
လက်ရှိအဘို့အသွား 0.91 ထိုနေ့ကိုမကြာသေးမီကထုတ်ဝေခဲ့သည် 30 / 07 / 2021.
မှတ်စု: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြည့်အဝရရှိနေသောအခြား Operating System တစ်ခုရှိသေးသည် Redoxမရ။ သင်သိလိုလျှင် Redox သူတို့ကသူတို့စူးစမ်းနိုင်တယ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ဆက်စပ်ထားသောပို့စ်ကိုတူတူရှာဖွေပါ။
Rust တွင်ရေးသားသော Redox OS သည် version 0.6 အသစ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာပြီး၎င်းသည်၎င်း၏သတင်းများဖြစ်သည်
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၎င်းသည်နည်းပညာဖြေရှင်းနည်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်အခါဖြစ်သည် "အခြားနည်းလမ်းသုံးစနစ်များ"aGNU / Linux များ, Windows နဲ့ MacOSကဲ့သို့သောလူသိများသောရွေးချယ်စရာများရှိသကဲ့သို့၊ "BSD သို့မဟုတ် ReactOS"သို့သော်လည်း၊ ယခုထိအာဏာတည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည့်၊ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးခေတ်မီအောင်ပြုလုပ်နေသည့်စီမံကိန်းများစွာရှိပါသည် “ Haiku, KolibriOS နှင့် Visopsys”အခြားများစွာတို့တွင် ထို့ကြောင့်ဤအေးမြ။ လူသိများထင်ရှားသောနည်းပညာပရောဂျက်များအကြောင်းကိုအနည်းငယ်လေ့လာရန်သူတို့၏ ISOs များကို download လုပ်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လျှင်ကောင်းလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အတော်ကြာ » Linux သို့အခြား operating system များ: လက်ရှိရွေးချယ်စရာ ၃ ခုရှိသည်
မင်္ဂလာပါ Diego ။ မင်းရဲ့မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သူတို့ကပိုတိုးတက်လာတာသေချာတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကတိုးတက်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အခြားနည်းလမ်းတွေပဲ။
ကောင်းပြီ၊ ဖော်ပြမထားသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုသည် Redox-OS ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များစွာနှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်ကြီးမားသောဆန္ဒရှိသည်၊ ၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့် linux စနစ်များကို သုံး၍ OpenTTD ကို သုံး၍ လက်ရှိစမ်းသပ်မှုများလုပ်နေသည်။ QEMU ကို run ရန်
Miguel Rodriguez အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ Miguel မင်းရဲ့မှတ်ချက်နဲ့အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကိုငါတို့စူးစမ်းမယ်။
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး ... ထို OS များသည် Windows, MacOS (သို့) Windows (သို့) MacOS နှစ်ခုလုံးကိုအခြားရွေးချယ်စရာများအဖြစ်မြင်ရန်ပိုမိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်။
မင်္ဂလာပါ Paul Cormier မင်းရဲ့မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းကိုလုံးဝသဘောတူတယ်။
KDEApps1: KDE Community Applications ကိုပထမဆုံးကြည့်ပါ